January 2022 – List Khabar
भोलि माघ १८ गते मंगलबार,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल!
January 31, 2022 जीवनशैली 0
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) उग्र स्वभावमा ध्यान राख्नुहोला । शारीरिक र मानसिक रुपले शिथिलताको अनुभव गर्नुहुनेछ । अधिक परिश्रमपछि सफलता पाउनुहुनेछ । सन्तानको विषयमा तपाईको चिन्ता रहनेछ। कार्यको भागदौडको कारण परिवारमा कम ध्यान जानेछ। हानिकारक विचार, व्यवहार न र आयोजनबाट टाढा रहनुहोला। …
…त्यसपछि उनलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि मन थाम्न सकेनम….! २ मिनेट समय दियर पधुनु होस।।
January 31, 2022 समाचार 0
बाजे, बाबु र आमाको नाम थाहा छैन । सडकमै बस्छु । सानैदेखि बनेपा बजारको सडकमा मागीखाने र सडकमै सुत्ने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सँगै समातिएकी उनीसँग केही समय पहिला सडकमै भेटघाट भएको हो । २÷३ महिना पहिला विवाह गरी बनेपा बजारमा कवाडी बटुल्ने काम गर्दै आएका थियौं । …
गर्भवति रहेकी भारतीले मागेपछी सलमान खानले दिए करोडौंको सम्पत्ति, आफु बस्ने फार्महाउस समेत दिए !
बलिउडका भाइजान अर्थात् सलमान खानका लागि सबैजना पागल छन् । फ्यानहरु उनको एक झलक पाउन आतुर छन् । योसँगै भाइजानले आफ्ना फ्यानलाई माया पनि दिइरहेका छन् । हाल सलमान फिल्मबाट टाढा बिग बोस १५ मा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिइरहेका छन् । टिभीको चर्चित रियालिटी शो बिग बोस १५ को ग्रान्ड फिनाले …
January 31, 2022 रोचक 0
शरीरमा महसुस हुने हरेक साना–ठूला परिवर्तनले मानिसको छिटो मृत्युको संकेत दिनसक्छ । डाक्टरले चेतावनी दिँदै यी संकेत हरेकले बुझ्न आवश्यक भएको बताउने गर्छन् ता कि यसलाई समयमा नियन्त्रण गर्न सकियोस् । एक शोधको आधारमा अनुसन्धानकर्ताले छिटो मृत्युको यो चेतावनी चिन्ह मृत्यु हुनु १० वर्ष अघि नै देखिने दाबी गरिएको छ …
January 31, 2022 प्रमुख समाचार 0
पछिल्लो २४ घण्टामा ५२९२ जनामा को- रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । १६०८८ जनामा गरिएको नमूना परीक्षणमा ५२९२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यसबेला देशभर ७९२७२ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही समयावधिमा ८१९१ जना निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् …
January 31, 2022 मनोरंजन 0
मोडल जिशु कोइरालाले नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गर्नुभएको छ । ‘तिमीलाई मेरो आफ्नो बन्न’ बोलको यस गीतमा गायक सूर्य काश्यपको स्वर सुन्न सकिन्छ । सुजन कँडेलको शब्द रहेको यस गीतमा रामकुमार रिमालको सङ्गीत रहेको छ । नारायण दङ्गालले यस गीतलाई सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको हो । प्रेमिल शैलीको गीतमा नायक पुष्प …
धरानमा विरामीको अ’प्रेसन गर्दा गर्दै अ’प्रेसन थिएटरमै डाक्टरहरुबीच झ’गडा भएपछि…
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दुई डाक्टरबीच अप्रेसन थिएटरमा भएको विवादबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन सुरु गरेको छ ।घटनाबारे उजुरी परेपछि काउन्सिलबाट सदस्य डा. हरिहर वस्तीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली छानबिन गर्न प्रतिष्ठान पुगेको छ ।छानबिन टोलीमा वस्तीसँगै काउन्सिलका अर्का एक सदस्य र विषयविज्ञ पनि छन् । गत पुस …
काठमाडौं । अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको भूमिका रहेको दक्षिण भारतीय फिल्म ‘थिरीमाली’ को गीत रंगबिरंगी सार्वजनिक भएको छ ।फिल्मको गीत शनिबार सार्वजनिक भएको हो । तीन मिनेट ५३ सेकेन्डको फिल्मको गीत ‘साइना मुभिज’ को युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त गीतमा अभिनेत्री स्वस्तिमाको अत्यन्तै उत्कृष्ट लुक्स देखिएको छ । बलिउडका …
कोभिड भएका मानिसको फोक्सो हेर्दा जे देखियो…..
January 31, 2022 Uncategorized, समाचार 0
यूकेमा भएको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले दीर्घ कोभिड भएका मानिसको फोक्सो सहजै पत्ता नलाग्नेगरी क्षति भएको देखाएको छ। नियमित जाँचबाट नदेखिने फोक्सोको अस्वाभाविक रूपबारे अध्ययनका लागि वैज्ञानिकहरूले नवीन ग्यास स्क्यान प्रक्रिया अपनाएका थिए। कोभिडको प्रारम्भिक चरणमा अस्पतालको उपचार आवश्यक नभएका तर पछि लामो समयसम्म श्वासप्रश्वासको समस्या भएका ११ जनामा अध्ययन गरिएको …
मध्यराति अचानक महिलाको शरीरमा केहि टाँ- सियो, छाम्दा भेटियो कसैले कल्पना नगरेको चिज (हेर्नुहाेस) । बिहारको मंगेर जिल्लाकी एक महिलाको ज्या-न त्यतिबेला सं कट-मा पर्यो जतिबेला मध्यरातमा अ* चा-नक उनलाई एक ना ग-ले बे र्यो । विचि त्रको आवाज सुनेपछि निन्द्राबाट ब्यूँ झि एकी महिला आफ्नो शरीरलाई ना ग ले …